Madaxweynaha Jubbaland oo qado sharaf u sameeyey Xulka kubadda cagta ee Jubbaland “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Jubbaland oo qado sharaf u sameeyey Xulka kubadda cagta ee Jubbaland “SAWIRRO”
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta qado sharaf u sameeyay Cayaartooyda Xulka Jubbaland ee ka qayb galay Cayaarahii Dowlad Goboleedyada ee dhawaan ka qab soomay magaalada Muqdisho.
Qado Sharaftan waxaa kale oo goob joog ka ahaa Madaxweyne ku xigeenka labaad, Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee Baarlamaanka, Wasiirka Dhallinyarada iyo xiriirka kubadda cagta ee Jubbaland iyo Cayaartooydii kasoo qayb gashay tartankii lagu soo gunaanaday magaalada Muqdisho.
Qado Sharafta kadib Mudane Axmed Maxamed Islaam waxaa uu ka hadlay sida ay Xukuumaddu diyaarka ugu tahay in la dhiiri galiyo cayaaraha, waxaana uu Xulka Jubbaland ku wareejiyay guri cusub oo Xulku uu yeelanayo, waxaana uu balan qaaday baabuur ay yeelan doonan Cayaartooyda Xulka iyo guddiga Garsoorka, isagoo hoosta ka xariiqay in ay dhisayaan garoon weyn oo Caalami ah, kaas oo laga hirgalinayo duleedka Magaalada Kismaayo.
“Ciyaaraha aad baan ugu dadaali doona gaar ahaan kubadda cagta oo aan wax badan ka qaban doono, waxaana hada aan wadnaa in aan garoon weyn ka dhisno duleedka magaalada oo qaab casri ah oo dunida la jaanqaadi karta loo dhisi doono” ayuu yiri Madaxweynaha Jubaland.
Sidoo kale Madaxweynahaha Dowlad goboleedka Jubaland waxaa uu sheegay in ay Xukuumaddu bixin doonto kharashka ku baxaya dhismaha qoys cusub oo uu yagleelayo mid kamid ah Cayaartooyda Xulka oo gabar kasoo guursaday magaalada Muqdisho.
“Hadaan koobkii weynay oo aan gabar soo helnay waan guulaysanay waxaana aan ka qayb qaadanaynaa dhismaha qoyskan cusub” ayuu yiri Madaxweynaha Dowlada Jubbaland.
Ugu danbayn Axmed Maxamed Islaam wuxuu hoosta ka xariiqay in uu abaal marin gudoonsiin doono Xulka, waxaana uu sheegay in wacdaradii ay ka dhigeen Muqdisho ay cadayn u tahay sida ay weli u jirto haybadii Kubadda Cagta ee Gobolku uu caanka ku ahaa oo uu hoosta ka xariiqay in ay sii bari gantaali doonaan.
Golaha Wasiirada Galmudug oo yeeshay kulan aan caadi ahayn
Gudiga doorashooyinka dadban oo Baydhabo kulan ugu qabtay odayaal dhaqameed